အသက်ရှည်ကျန်းမာချင်ပါသလား? Natto (ဂျပန်ပဲပုပ်) ကိုစားပါ။ ဂျပန်ပဲပုပ်ရဲ့ အံ့သြဖွယ်ကောင်းကျိုးကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ - JAPO Japanese News
သော 03 Sep 2021, 10:10 မနက်
အချဥ်ဖောက်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုတာကို ရှေးကတည်းက ပြီးတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပြောကြပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အသစ်သုတေသနမှာလည်း အချဥ်ဖောက်ထားတဲ့အစားအသောက်နဲ့ ဆက်စပ်မှုကို ရှာဖွေခဲ့ပြီး ကိုရိုနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါပြင်းထန်မှုဟာ အချဥ်ဖောက်ထားတဲ့အစားအသောက်အမျိုးအစား၊ ပမာဏနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ယှဥ်ရင် အာရှမှာ သေဆုံးနှုန်းက အတော်လေးနည်းပါးပါတယ်။
ဥရောပမှာလည်း ချိစ်နဲ့ ဒိန်ချဥ်တွေက အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးအစားက အာရှတစ်ခွင်လောက် အများကြီးမရှိပါဘူး။
ဒီအချဥ်ဖောက်ထားတဲ့အစားအသောက်အမျိုးအစားနဲ့ပမာဏကွဲပြားမှုဟာ ကိုရိုနာကြောင့် ရောဂါပြင်းထန်မှုကို ကာကွယ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေမလားဆိုပြီး သုတေသနပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
ကိုရိုနာအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိရှိ၊ မရှိရှိ အချဥ်ဖောက်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကောင်းစေတယ်ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံကနေ သိရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးလည်း အချဥ်ဖောက်ထားတဲ့အစားအသောက်ကို ကောင်းစွာ စားသင့်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်း အချဥ်ဖောက်ထားတဲ့အစားအသောက်များစွာ ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲကမှ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတာကတော့ ပဲပုပ်ကိုသုံးပြီး အချဥ်ဖောက်ထားတဲ့ အစားအသောက်ဖြစ်တဲ့ မီဆိုနဲ့ ဂျပန်ပဲပုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးပေါင်း ၉ သောင်းကျော်ကို ၁၅ နှစ်ကြာ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ ပဲပုပ်ကို အချဉ်ဖောက်ထားတဲ့အစားအသောက်ကို စားလေလေ သေဆုံးနိုင်ခြေပိုနည်းလေဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂျပန်ပဲပုပ်ကို မကြာခဏစားတဲ့သူတွေဟာ နှလုံးကြွက်သားပုပ်ခြင်းစတဲ့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေကြောင့် သေဆုံးနိုင်ခြေကို လျော့နည်းစေတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးကောင်းကြပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အနံ့လည်း ဆိုးတယ်။ စားချင်စရာလည်းမရှိဘူး။
ဒါပေမယ့် အစာလည်းဆေးလို့တွေးပြီး စားကြည့်ရင်ရော ဘယ်လိုလဲ? ကျန်းမာရေးမကောင်းတာနဲ့စာရင်တော့ စားတာပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လားနော်။
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ နံပါတ် ၁ ဂျပန်ပဲပုပ်စားနည်းလေးကို မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
နာမည်အတိုင်း ရှာလကာရည်ထည့်ထားတဲ့ ဂျပန်ပဲပုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်ပဲပုပ်တစ်ထုပ်မှာ ၄၀-၅၀ ဂရမ်လောက်ရှိပြီး အဲ့ထဲကို ရှာလကာရည် ၂၀-၅၀ မီလီလီတာ ထည့်ပါမယ်။
ပြီးတော့ ဂျပန်ပဲပုပ်နဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့ ဆော့စ်ထည့်လိုက်ရင်တော့ စားလို့ရပါပြီ။
အနံ့ပိုဆိုးလာမှာပေါ့လို့ထင်သွားမလားမသိဘူး။ လက်တွေ့မှာတော့ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် လန်းဆန်းစေပါတယ်။
ပြီးတော့ အမြှုပ်ပိုထွက်လာပြီး အိအိလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ရှာလကာရည်ထည့်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ စားရလွယ်ကူစေဖို့မဟုတ်ဘဲ သံဓာတ်ပါဝင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
သံဓာတ်ကလည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်ပဲပုပ်မှာလည်း သံဓာတ်ပမာဏများစွာပါဝင်နေပေမယ့် စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ ဂျပန်ပဲပုပ်မှာပါတဲ့သံဓာတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်က စုပ်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ရှာလကာရည်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက် ဒီဂျပန်ပဲပုပ်ရဲ့ သံဓာတ်စုပ်ယူနှုန်းကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
သံဓာတ်ဟာ သွေးထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ခေတ်အမျိုးသမီးငယ်အများစုက သံဓာတ်ချို့တဲ့နေကြပါတယ်။
ဓမ္မတာကြောင့် သွေးအားနည်းတဲ့သူလည်းရှိပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကလည်း သာမန်ထက် သွေးအားနည်းလွယ်ပါတယ်။
ဒီလိုအရာတွေကြောင့် သံဓာတ်ချို့တဲ့နေရင် ရှာလကာရှည်ဂျပန်ပဲပုပ်ကို သေချာပေါက် စားကြည့်ပါ။
ဒါ့အပြင် ရှာလကာရှည်ဟာ သွေးတိုးကို ကာကွယ်ပေးပြီး၊ သွေးတွင်းသကြားမြင့်တက်မှုကို လျှော့ချပေးတဲ့အတွက် အမျိုးသားများအတွက်လည်း ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်။
နည်းနည်းလောက် စားရလွယ်အောင်လုပ်ချင်ရင်တော့ ကြက်သွန်မြိတ်ပါးပါးလေးထည့်တာတို့၊ ငရုတ်ဆီ နည်းနည်းလေးရောတာတို့လုပ်ရင်လည်း အရသာရှိပါတယ်။
အနံ့ဆိုးတယ်။ စားချင်စရာမရှိဘူးဆိုပေမယ့် စားတာကြာလာရင် ခံတွင်းတွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်သလောက် နေ့တိုင်းဂျပန်ပဲပုပ်ကိုစားပြီး ကျန်းကျန်းမာမာနေထိုင်နေပါတယ်။
ချစ်စရာကောင်းသလို ကြောက်စရာလည်းကောင်းတဲ့ ကလီအိုနဲ (Clione)